के मँ यो संग टाढा जान्छु - भगवान् स्विट्जरल्याण्डको विश्वव्यापी चर्च
लेख > टोमी Tkach द्वारा > के म संग टाढा जान्छु?
केहीले यसको खेल बनाउँदछन्। केहि हडबडी मा वा डर मा बाहिर यो। कोहीले यो उद्देश्यको लागि, द्वेष बाहिर। हामी मध्ये धेरैले यसलाई हरबखत गर्छौं, हामी यो सबै समय वा अनियमित रूपमा गर्छौं। हामीलाई थाहा छ के सही छैन भने हामी पकड्न को लागी प्रयास गर्दैनौं।
यो विशेष गरी कार चलाउँदा स्पष्ट हुन्छ। के म भाग्न सक्दछु यदि म यस ट्रकलाई गलत साइडमा जान दिन्छु? के म भाग्न सक्षम हुनेछु यदि म पूर्ण रूपमा स्टपमा रोक्दिन वा अझै पहेलो बाट ड्राइभ गरें? यदि म गति भन्दा बढी भयो भने के म उम्कन सक्नेछु - म हतारमा छु?
कहिलेकाँही म खाना पकाउँदा वा सिलाउँदा समातिन नदिन। कसैले मद्दत गर्दैन यदि मैले फरक मसला प्रयोग गरेको छु वा यदि मैले एउटा टुक्रा गलत सिलाएको छु भने। वा म असुरक्षित चकलेटको एक थप टुक्रा खाने कोशिस गर्दछु, वा आशा गर्दछु कि अभ्यास नगर्ने मेरो अल्छी बहाना पत्ता लाग्दैन।
के हामी आध्यात्मिक कुरालाई त्याग्न खोज्छौं जुन भगवानले याद गर्नुहुन्न वा बेवास्ता गर्नुहुन्न? स्पष्ट रूपमा भगवानले सबै कुरा देख्नुहुन्छ, त्यसैले हामी जान्दछौं कि हामी त्यस्तो जस्तोबाट टाढा जान सक्दैनौं। के उहाँको अनुग्रहले सबै थोक ढाक्दैन?
अझै, हामी अझै प्रयास गर्दैछौं। हामी तर्क गर्न सक्छौं: म आज प्रार्थना नगरी भाग्न सक्छु। वा: म यो सानो गफ वा यो संदिग्ध वेबसाईटमा हेरेर टाढा जान्छु। तर के हामी साँच्चिकै यी चीजहरूबाट टाढा जान्छौं?
ख्रीष्टको रगतले एक इसाईको पाप, विगत, वर्तमान र भविष्यलाई समेट्छ। तर के यसको मतलब हामीले चाहेको केही गर्न सक्छौं भनेको हो? कसै-कसैले यो प्रश्न सोधे पछि यो थाहा पाए कि भगवानको अगाडि अस्तित्वमा रहन व्यवस्था अनुपालनमा के लाग्छ त्यो सबै अनुग्रहको हुँदैन।
रोमी:: १-२ मा पल्टाउने नम्बरको साथ पावल जवाफ दिन्छन्:
"म आफूलाई कत्तिको अनुमति दिन सक्छु र यसबाट टाढा हुन सक्छु?" भगवानलाई खुशी पार्ने मनोवृत्ति होइन। जब उनले मानवता बचाउने योजना बनाए तब उनको मनोवृत्ति थिएन। उहाँ क्रूसमा जानुहुँदा यो येशूको दृष्टिकोण थिएन। भगवानले दिनुहुन्छ र दिनुहुन्छ - सबैकुरा। उसले सर्टकट खोजिरहेको छैन, न्यूनतम आवश्यकता वा के उसले हाल आफ्नो मार्ग पार गरिरहेको छ। के उसले हामीबाट केही कमको आशा गर्छ?
परमेश्वर हामीले दिने मनोवृत्ति देखेको चाहनुहुन्छ जुन उदार, मायालु र अक्सर दिनुपर्ने हो, आवश्यक भन्दा बढी। यदि हामी जीवनमा जान्छौं र सबै प्रकारका चीजहरूबाट टाढा जान प्रयास गर्छौं किनकि अनुग्रहले सबै कुरालाई समाहित गर्दछ, तब हामीले धेरै स्पष्टीकरण दिनु पर्छ।